Miyaad Ka Badbaarisay Kumbiyuutarkaaga Ka Soo Weeraray Botnet? - Haddii Maya, Raac Macluumaadka Kacsan
Nik Chaykovskiy, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay in botnets uu ka kooban yahay shabakadaha "kombiyuutarada zombie," kuwaas oo inta badan ku dhaco khayaano iyo xakameyaal martida fog. Xaaladahan, khaanad internetka ah ayaa bilaabay amarro sida dirista spam ama weerarida kombiyuutarada kale. Boorsada waa software xaasidnimo ah kaas oo awoodi kara inuu diro oo helo macluumaadka ka fog fogaanta taliska iyo Control (C & C) server - systane hydration ud. Ruqsaddan waxaa isticmaali kara dadka ujeeda rabshad leh si ay waxyeelo u geystaan ​​una dhaawacaan dhibbanayaashooda. Waagii hore, bots ayaa la xiriiray dambiyo badan oo internetka ah sida weerarrada DDoS. Dadka haysta bogagga ganacsiga waxay yaqaanaan qaar ka mid ah koofiyadaha cad cad. Tusaale ahaan, Google, Yahoo, iyo Bing waxay isticmaalaan kootaroolka sida websaydhayaasha webka si ay u aadaan website-yada oo ay soo qaataan macluumaadka muhiimka ah ee bogga
Waa maxay khadka teleefoonka
Booti hal ah wuxuu ka kooban yahay qaybta shaqada ee botnetka. Boorka waa barnaamij sahlan oo koodhku u oggol yahay in ay fuliyaan amarrada ka yimaada martida fog. Bootiga waa in uu si toos ah u kiciyaa kombiyuutarka. Halkan, ayaa botigu u baahan yahay inuu la xidhiidho Talis iyo kormeerid server fog. Weeraryahanku wuxuu markaa isticmaali doonaa barnaamijka macaamiisha si uu weeraro uga galo shabakaddan botnets.
Marka codsiga la calaamadeeyo, qaar ka mid ah moobiilka madow waxay macnaheedu tahay in ay dacaayad u tahay dhibanayaasha. Khiyaamada khatarta ah ee botnet ayaa weerara in ka badan 20,000 kumbuyuutar. Weeraryahannadu waxay isticmaalaan tabaha si ay dadku ugu dhejiyaan khayaanadooda kumbuyuutarkooda. Tusaale ahaan, dadku waxay go'aansan karaan inay u soo diraan macaamilka spam macaamiishooda. Email-yadaasi waxay ku jiri karaan xiriiro waxyeelo leh oo khatar ah. Dadka kale ayaa laga yaabaa in ay ku soo lifaaqaan lifaaqyo ay ku jiraan nacas iyo trojans..Weerarradan waxay bartilmaameedsanayaan isticmaalaha kombiyuutarka, kaasoo ah dhibbanaha nugul
Dhibaatooyinka waa in ay ku sii jiraan nidaamka kontaroolka midaysan. Qalabkani wuxuu isku xiraa midba midka kale iyadoo la raacayo qaababka sida:
Xirfadlayaasha Dhibaatooyinkaasi waxay isku xirxiraan oo u diraan amarro. Haseyeeshee, bot-master wuxuu wali xakameyn karaa isgaadhsiinta guud ee qorshaha bangiga.
C & C oo loo yaqaan 'botnet' Tani waa qaab isku mid ah oo wax lagu baro. Weeraryahanku wuxuu si toos ah ugu amri doonaa shabakada in laga helo server C & C. Tani waa meesha ay sameeyaan weeraro badan.
Habka isku-dhiska Tani waxay isku daraysaa farsamooyinka kor ku xusan
Dadku waxay awoodi karaan in ay sameeyaan weeraro badan oo botnet ah iyagoo gacan ka helaya shabakadda bot. Tusaale ahaan, dadka isticmaala qaarkood waxay bilaabi karaan inay soo diraan emaylka spam. Waagii hore, dambiyada sida xadida xogta waxay had iyo jeer ahaayeen natiijada howlaha botnets. Tusaale ahaan, mashiinnada weerarka ayaa wax u dhimaya amniga internetka. Isticmaalayaasha xogta xasaasiga ah ee kombiyuutarkooda ayaa halis u ah inay lumiyaan dhammaan gambarka. Tusaale ahaan, xatooyada kaararka deynta, xatooyada macluumaadka dhaqaalaha, iyo lumitaanka aqoonsiyada login.
Waa lagama maarmaan in la barto sida loo xakameeyo weerarada botnetka. Xaaladaha badankood, botnets waxay ka bilaabmaan barnaamijyo sahlan oo fudud oo soo galaya kombuyuutar qof aan aqoon. Dhammaan kiisaskan, wacyi-gelinta waxay wanaajin kartaa xaaladda ammaanka internetka. Dawladdu waxay awood u leedahay inay muwaadiniinta ka badbaadiso dembiileyaasha internetka.